Jawar Mohamed Oo Weerar Culus Ku Qaaday Soomaalida, Una Tilmaamay Sida Ay Guul Ku Gaadhi Karayaan - Jigjiga Online
HomeSomalidaJawar Mohamed Oo Weerar Culus Ku Qaaday Soomaalida, Una Tilmaamay Sida Ay Guul Ku Gaadhi Karayaan
Jawar Mohamed Oo Weerar Culus Ku Qaaday Soomaalida, Una Tilmaamay Sida Ay Guul Ku Gaadhi Karayaan
Minneapolis (JigjigaOnline) – Aktifiistaha caanka ah ee qowmiyadda Oromada, Jawar Mohammed ayaa weerar ku qaaday hab-dhaqanka Soomaalida iyo dhacdooyinkii siyaasadeed ee ugu dambeeyey ee Dawladda Deegaanka Soomaalida.
Jawar Mohamed oo ka hadlayey kulan bulsho oo uu ku qabtay dalka Maraykanka, ayaa waxa uu usoo jeediyey Soomaalida in arrimahooda gaarka ah ee kala-qaybsanaanta iyo khilaafaadka dhexdooda ay kalidooda xallistaan, isla markaana aanay usoo gudbinin dhinaca qowmiyaddiisa Oromada iyo Itoobiya kale, taas oo uu xusay inay uga sii dari karto.
“Walaalaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay, fadlan dhibaatada dhexdiina taalla hanoola imanina, xumaanta dhexdiina taalla gudihiina ku xallista. Dharkaaga wasakhda ah, gurigaaga ayaa lagu dhex dhaqdaa.” Ayuu yidhi Jawar Mohamed oo si adag ula hadlayey Soomaalida.
Jawar waxa uu sheegay in Soomaalidu isku-duubni kaliya ku gaadhi karto danteeda, isagoo soo qaaday khayraadka ku jira dhulka Soomaalida, odayaasha dhaqanka ee u heellan xallinta mushkiladaha gudaha iyo arrimo kale, waxaanu yidhi: “Sida kaliya ee danta Soomaaliyeed aad ku gaadhi kartaan waa midnimadiina oo kaliya, laakiin ha ku xisaabtamina inaad cid kale isugu qayshataan, xattaa anaga haddii aad noola timaaddaan ogaaada cid waliba way idinka faa’iidaysan doontaa, mana jirto cid dantiina ka shaqaysaa. Waxaad leedihiin dhul dihin, waxaad leedihiin odayaal iyo waxgarad wanaagsan, waanan soo arkay oo waxay nala xalliyeen colaaddii labada shacab. Anagu (Oromada) waanu wada fadhiisanay oo wada hadalnay, idinkuna wada hadla ama ONLF ha ahaato ama xukuumadda Mustafe hoggaamiyo ha noqoto e, wax walba idinku dhamaysta.”
Intaa kaddib waxa uu Jawaar caddeeyey in Oromadu ay garab taagan tahay Soomaalida oo ay yihiin dad walaalo ah, waxaanu yidhi: “Waxaynu nahay dad walaalo ah, waxaanu idinka ballan-qaadaynaa inaanu garabkiina noqono, laakiin wixii dhexdiina ah, fadlan idinku xallista. Ma rabno inaanu arrimaha deegaanka Soomaalida farogelino.”
Mar uu ka hadlayey doorashooyinka iyo tafaraaruqa Soomaalida dhexdiisa, waxa uu yidhi: “Doorasho xalaal ah ayaa dan inoo wada ah, taasna waan idinkala shaqaynaynaaye tafaraaruqa iska daaya, su’aalaha Soomaaliyeed na kaliya waxa lagaga jawaabi karaa gole Soomaaliyeed.”
Xisbi Mise Qabiil, Urur Mise Gabbaadka Dembiileyaasha?
Donald Trump: “Meel walba oo ay tagto way xumaataa, Soomaaliya ayay ka bilowday”